भएन त तनाब ! बिहे गरेर आउँदाआउदै बीच बाटोबाटै दुलही बेपत्ता… — Imandarmedia.com
भएन त तनाब ! बिहे गरेर आउँदाआउदै बीच बाटोबाटै दुलही बेपत्ता…
दुलाहाका भाइले बताएअनुसार बिहेको वेला दुलही प्रितीको मुहारमा कत्ति पनि तनाव देखिएको थिएन । त्यसकारण आफूहरू बिहेको समयमै चकित परेको उनको भनाइ छ ।
दुलहीका बाबु जयराम शर्माका अनुसार प्रिती र छत्रपतिको जुलाई १ मा सघाइ भएको थियो । उनीहरू एकले अर्कालाई मन पराएरै बिहेका लागि राजी भएका थिए ।